आरआरआर र मैदान जुध्ने भएपछि तनावमा अजय : RajdhaniDaily.com - आरआरआर र मैदान जुध्ने भएपछि तनावमा अजय
Home Not-to-be-missed आरआरआर र मैदान जुध्ने भएपछि तनावमा अजय
मुम्बइ । आफ्नो दुई ओटा फिल्मको प्रदर्शन मिति जुधेपछि बलिउड अभिनेता अजय देवगन यतीबेला तनावमा छन् । उनको दुई ओटा फिल्म आरआरआर र मैदानको रिलिज मिति एकै दिन तोकिएपछि उनी तनावमा परेका हुन् ।
यी दुवै फिल्मलाई आगामी दसैंमा रिलिज गरिने भएको छ । दुवै फिल्म आफ्नो महŒवपूर्ण फिल्म भएकाले यसरी एकसाथ फिल्म जुध्दा दुवै फिल्मलाई असर पर्ने उनले बताएका छन् ।
बाहुबली जस्तो फिल्म बनाईसकेका एसएस राजामौलीले फिल्म आरआरआर बनाएका हुन् । यो फिल्म अहिलेको निकै आशा गरिएको फिल्म हो । अजयकै अर्को फिल्म मैदानलाई आगामी दसैंमा रिलिज गर्ने भनेर केही दिनअघि नै तय गरिएको थियो । तर यतिबेला राजामौलीले अजयकै अर्को फिल्म आरआरआरलाई आगामी दसैंमा रिलिजको घोषणा गरेका हुन् ।
फिल्म मैदानलाई बोनी कपुरले निर्माण गरेका हुन् । आफूले दसैंमा मैदान ल्याउने घोषणासहित तयारीमा जुटेको बेला राजामैलीले आरआरआरको रिलिज मिति पनि सोही समयमा घोषणा गरेकोमा बोनीले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
निर्माता बोनी कपुरले अभिनेता अजयलाई यसरी फिल्म नजुधाउनका लागि राजामौलीसँग बार्ताको लागि अनुरोध गरेका छन् । दुवै फिल्म एकसाथ आउँदा दुवै निर्मातालाई असर पर्ने भएकाले फिल्म आरआरआरलाई पछि सार्नका लागि बोनी कपुरले आग्रह गरेका हुन् ।
फिल्म आरआरआरलाई दसैंमा रिलिज गरिनेबारे आफूलाई पनि जानकारी नभएको र राजामौलीले आफ्नै हिसाबले दसैंमा रिलिजको लागि मिति तय गरेको अजयको भनाइ छ । आफूले फिल्म नजुधाउन निर्देशक राजामौलीसँग पहल गर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
काठमाडौं । पत्रकार जनक रावलले आफ्नो नयाँ गीत म माया लाउदिन...को भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । २०४९ सालदेखि गीत लेखनमा सक्रिय गीतकार रावलका यसअघि...
प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध जसपाको मसाल जुलुस
राजधानी समाचारदाता - December 26, 2020 0
सप्तरी, राजविराज । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सप्तरीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंबैधानिक भन्दै बिरोध प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ । अघिल्लो...
भर्खरै प्रशान्त वली - October 16, 2020 0
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - January 11, 2021 0
जनता आवास कार्यक्रमलाई तिब्रताका साथ अगाडी बढाउने मन्त्री साहको योजना
प्रदेश ३ राजधानी समाचारदाता - February 11, 2021 0
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले जनता आवास कार्यक्रमलाई तिब्रताका साथ अगाडी बढाउँने बताएका छन् । बिहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री साहले...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - February 6, 2020 0
प्रदेश २ राकेश गुप्ता - September 14, 2020 0
सर्लाही । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा करेन्ट लागेर एक जना पुरुषको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा वडा नं. ५ बस्ने ५२ वर्षिय पुरुष मोती...